कृषी – Letang Khabar
मोरङ, ७ फागुन । मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले ब्यावसायिक कृषि उत्पादन गरिरहेका किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि उत्पादन प्रदर्शनी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्रदर्शनीमा नगरका ८५ जना ब्यवसायिक किसानले आफ्नो उत्पादन राखेका थिए । तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, दलहन, मह विभिन्न सय प्रकारका कृषिबाली प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । उत्तरी मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति […]
विराटनगर, १८ भदौ । वर्षदिनका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न लगाइएको धान उत्पादन वृद्धि गर्न चाहिने मल उपलब्ध नहुँदा यहाँका किसान चिन्तित भएका छन् । धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल अहिले हाल्नु पर्नेमा उपलब्ध नहुँदा उनीहरु चिन्तित एवम् हतास देखिएका छन् । लेटाङमा रहेका बिभिन्न सहकारी संस्थाहरुले बिगत बर्षहरुमा मल बितरण गर्दै आएका थिए भने […]
लेटाङ(मोरङ), १५ असार । मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख शंंकर राईले १७ औं राष्ट्रिय धान दिवस एवं असार १५ को अवसरमा शुभकामना दिनु भएको छ । नगरवासीका नाममा शुभकामना दिँदै कोरोना भाइरसको महामारीले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउन कृषि उत्पादन र पशुपालन पहिलो विकल्प भएको बताउनु भएको छ । परम्परागत रुपमा हुने खेतीले निर्वाहा मात्र हुँदै […]
लेटाङ, १० जेठ । धानको विउ राख्ने समय हो यो । यस समय धेरै धान फल्ने , छिटो पाक्ने , स्वादिलो धानको खोजीमा किसानहरु छन् । कतिपय किसानहरुले धानको विउ राखिसकेका छन् भने कतिपय अझै राखिरहेका छन् । हाल लेटाङमा उपलब्ध हुन सक्ने, हर्दिनाथ, रन्जित धान उपयुक्त हुने अगुवा कृषकहरु वताउछन् । त्यसो त ठुलो […]
६५ परिवारलाई टनेल वितरण
लेटाङ, १४ फागुन । आधुनिक कृषी प्रणाली अवलम्बन गर्ने उदेश्य सहित ६५ परिवार किसानलाई टनेल वितरण गरिएको छ । लेटाङ नगरपालिका र वडा नं. ८ को आर्थिक सहयोगमा लेटाङ ८ जाँतेका कृषकहरुलाई उक्त कृषी सामाग्री प्रदान गरिएको हो । लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राईले मंगलवार वडा नं. ८ को कार्यलयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कृषकहरुलाई टनेल […]
मुख्यमन्त्री कप अनियमितता प्रकरण: लेखा समितिले पत्र काट्यो
विराटनगर ,२८ साउन २७। मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश १ ले आयोजक समितिलाई पत्र काटेको छ । लेखा समितिले औपचारिक रुपमा आयोजक पक्षलाई बोलाएर छानबिन सुरु गरेको एक साता वितिसक्दा समेत आवश्यक काजगपत्र नबुझाएको भन्दै समितिले आइतबार पत्र पठाएको हो । यसअघि गत साउन १७ गते […]
उद्यमी वन्ने तालिमको समापन
लेटाङ २४ जेष्ठ । लेटाङ नगरपालिकाको आयोजना तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लेटाङको सहआयोजनामा भईरहेको १५ दिने व्यवसायिक बाख्रा पालन, ब्यवसायिक कृषि खेति तथा मिल मेशेनरी मर्मत तालिमको एकैपटक समापन भएको छ । जनसेवा सामुदायिक बनको सभाहलमा भएको समापन कार्यक्रममा लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राई प्रमुख अतिथिको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा वोल्दै नगरप्रमुख राईले […]
गोपाल काफले पथरी (मोरङ) बुधबार, फागुन ०१ , २०७५ । पथरीशनिश्चरे ३ मोरङका कृषक भोला खरेल ‘मानव स्वास्थ्य माटो र पर्यावरण जोगाउन रसायनिक मल विषादि मुक्त जैविक खेती गरौँ, स्थानीय जातलाई नश्ल सुधार गरी बाख्रा पालनमा आम्दानी बढाऔँ।’ भन्ने नाराका साथ अर्गानिक खेती गदै आएका छन । गोठ कृषि फार्मले नगरकै पहिलो अर्गानिक सागसब्जी उत्पादन […]